Ukhubazekile Luloyiko-Ukubuyela ekuhleni eBukumkanini
Iphuma kwikhaya elibaluleke kakhulu namhlanje kunangaphambili… Inikwe nguPope Benedict XVI ngomhla wama-20 ka-Agasti, 2011 kumsitho wama-26 woSuku loLutsha lweHlabathi:
Umntu oselula anganyaniseka njani elukholweni kodwa aqhubeke elangazelela imilinganiselo ephakamileyo kuluntu lwanamhlanje? KwiVangeli esisandul’ ukuyiva, uYesu usinika impendulo yalo mbuzo ungxamisekileyo: “Njengoko uBawo wandithandayo, nam ndanithanda; hlalani eluthandweni lwam” (Jn 15: 9).
Ewe, zintanda, uThixo uyasithanda. Le yinyaniso enkulu yobomi bethu; yiyo eyenza yonke enye into ibe nentsingiselo. Asiyomveliso yamabona-ndenzile okanye into engekho ngqiqweni; endaweni yoko ubomi bethu buqala njengenxalenye yecebo lothando likaThixo. Ukuhlala eluthandweni lwakhe, ke ngoko, kuthetha ukuphila ubomi obumiliselwe elukholweni, ekubeni ukholo lungaphezu kokwamkela iinyaniso ezithile ezifihlakeleyo: lulwalamano olusenyongweni noKristu, osivumelayo ukuba sivule iintliziyo zethu kule mfihlelo yothando nothando. ukuze baphile njengamadoda nabafazi abaziyo ukuba bayathandwa nguThixo.
Ukuba uhleli eluthandweni lukaKristu, olumiliselwe elukholweni, uya kudibana, naphakathi kweziphazamiso kunye nokubandezeleka, umthombo wolonwabo lokwenene novuyo. Ukholo aluchasananga neyona njongo iphakamileyo; ngokuchaseneyo, iphakamisa kwaye ifezekise ezo ngcamango. Batsha abathandekayo, musani ukwaneliseka nayiyo nayiphi na into engaphantsi kweNyaniso noThando, musani ukwaneliseka yinto engaphantsi kukaKristu.
Kule mihla, nangona eyona nkcubeko ibalaseleyo yokujonga izinto ezisingqongileyo inikezele ekufuneni inyaniso, nokuba lolona langazelelo luphezulu lomoya womntu, kufuneka sithethe ngenkalipho nokuthobeka ngokubaluleka kukaKristu kwindalo iphela njengoMsindisi wehlabathi. ubuntu kunye nomthombo wethemba kubomi bethu. Lowo wazithabathela kuye iimbandezelo zethu, uqhelene kakuhle nemfihlelo yokubandezeleka kwabantu kwaye ubonakalisa ubukho bakhe bothando kwabo babandezelekileyo. Nabo ke, bemanyene nenzondelelo kaKristu, banesabelo ngokusondeleyo kumsebenzi wakhe wokukhulula. Ngaphezu koko, ingqalelo yethu yokungabi namdla kwabagulayo nabalityelweyo iya kuhlala ibubungqina obuthobekileyo nobufudumeleyo bemfesane kaThixo.
Zintanda, makungabikho mbandezelo kunityhafisayo. Musani ukuloyika ihlabathi, nalikamva, kwanobuthathaka benu. INkosi ikuvumele ukuba uphile kulo mzuzu wembali ukuze, ngokholo lwakho, igama lakhe liqhubeke liduma kulo lonke ihlabathi. —Uhambo Lwabapostile lokuya eMadrid, eSpeyin, kuMlindo Wokuthandaza Nolutsha; IVatican.va
Ukuba “uthando olugqibeleleyo luluphosela phandle uloyiko” (1 Yohane 4:18).
uloyiko lugxotha uthando olugqibeleleyo.
Yiba luthando olukhupha uloyiko.
Ekuqaleni kobupostile bam, ndenze udidi olubizwa ngokuba “Ukukhubazeka Ngoloyiko", Uthotho lwemibhalo ingakumbi yeyure esiphila kuyo ngoku. Uyakwazi ukukhangela ezo mibhalo Apha. -mm
exhonyiweyo Abaxhasi bethu, imiyalezo.
← Luz – Ngoku lixesha!
UMarija-Buyela kuMthandazo wakho →